Vaovao - Miroso amin'ny zavamaniry simika nomerika ny Zouping Mingxing Chemical
Zouping Mingxing Chemical dia miroso amin'ny zavamaniry simika nomerika
Ny tsipika famokarana mandeha ho azy eo alohantsika dia ny tsipika famokarana manan-tsaina nohavaozina sy novain'ny Zouping Mingxing Chemical Co., Ltd. miaraka amin'ny fampiasam-bola mitentina 100 tapitrisa yuan amin'ity taona ity. Amin'izao fotoana izao, ny vokatra simika dia napetraka ao anaty famokarana. Raha ny filazan'ny mpitantana jeneralin'ny orinasa, tamin'ny "fitsapana lehibe" tamin'ny toe-javatra nisy ny valanaretina, dia "nandray ny fanadinana" tamim-pahombiazana ny orinasa miankina amin'ny fanavaozana ara-teknolojia, ary ny tsipika famokarana manan-tsaina koa dia nitondra hevitra vaovao ho an'ny fampandrosoana ny orinasa. Amin'ity taona ity, ny orinasa dia hifantoka amin'ny fampivoarana ny vokatra vaovao miaraka amin'ny atiny teknolojia avo lenta ary manome lanja avo lenta ary hiezaka hanangana toby famokarana kilasy voalohany sy iraisam-pirenena.
Voakasiky ny toe-javatra valanaretina, tsy mora ny fanatratrarana tanjona toy izany, fa feno fahatokisana ireo mpitarika ny orinasa: "miaraka amin'ny fitarihan'ny faharanitan-tsaina indostrialy, manafaingana ny fanovana sy fanavaozana, ary mampiroborobo ny fanovana ny orinasa amin'ny fomba nentim-paharazana. ny famokarana ka hatramin'ny famokarana miampy sanda. "
Ankoatry ny fanafainganana ny fiovan'ny tsipika lehibe, ny Zouping Mingxing Chemical Co., Ltd. dia manafaingana ny diany mankany amin'ny orinasa simika nomerika ihany koa. Izy io dia mikasa ny hahatsapa ny fiasan'ny mekanika manan-tsaina amin'ny fametahana sy ny fandanjana hatramin'ny fakana vokatra, ny fametahana ary ny fahitana ny lesoka. "Amin'izany fomba izany, ny isan'ny mpiasa ampiasaina dia ahena 32%, fa ny fahombiazan'ny famokarana atrikasa dia avo roa heny.".
Raha te handresy ny tsena anatiny isika dia tsy maintsy mivoaka amin'izao tontolo izao. Amin'izao fotoana izao, ny Zouping Mingxing Chemical Co., Ltd. dia manafaingana ny fiakarana avy amin'ny "famokarana miorina amin'ny famokarana" mankany amin'ny "famokarana miompana amin'ny serivisy", manamafy hatrany ny tombony anavahana azy ary mampitombo ny anjarany eo amin'ny tsena. Tamin'ny telovolana voalohany tamin'ity taona ity, mitentina 30 tapitrisa dolara amerikana ny fifanakalozam-bola vahiny azo avy amin'ny fanondranana, miaraka amin'ny fiakarana 30% isan-taona. Hiezaka izahay hahazo 100 tapitrisa dolara amerikana fanondranana amin'ny taona iray manontolo.